» सरकारले निषेधाज्ञा मात्र गर्छ, स्वास्थ्यको राम्रो प्रबन्ध गर्न सक्दैन: इन्द्र बानियाँ
सरकारले निषेधाज्ञा मात्र गर्छ, स्वास्थ्यको राम्रो प्रबन्ध गर्न सक्दैन: इन्द्र बानियाँ
११ भाद्र २०७७, बिहीबार २१:३३
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद ईन्द्र बानियाँले वर्तमान सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पूर्ण रुपमा असफल भएको दाबी गरेका छन् । उनले सरकारले निषेधाज्ञा र लकडाउन लगाउनमात्रै जानेको तर आईसोलेशन सेन्टर र क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेको जिकिर गरे । बिहीबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ नेता बानियाँसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोरोना रोकथामको लागि सरकारले कति राम्रो काम गरिरहेको छ ? बाग्मती प्रदेश कति सफल छ ?
एउटा निषेधाज्ञा र लकडाउन जानेको यो सरकारले, टाइमलाई एक्स्टेन्ड गर्ने, त्यो निषेधाज्ञा र लकडाउनभन्दा केही छैन । यो अवधिमा कसरी आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने, कसरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, खाना र तातोपानीदेखि लिएर सबै कुराको त्यो ठाउँमा कसरी व्यवस्था गर्ने, शौचालय र पानीको व्यवस्था कसरी गर्ने त्यो कुरामा कुनै ध्यान छैन । व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, लकडाउन, निषेधाज्ञा गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई तहसनहस बनाउने काम भएको छ, अहिलेको सरकारको ।
तपाईहरू के हेरेर बसिरहनुभएको छ ? कांग्रेस सुतेर बस्ने ? सरकारलाई लकडाउन, निषेधाज्ञा आवश्यक छैन भनेर तपाईहरू भन्न सक्नुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेस निषेधाज्ञाको बीचमा पनि १४औँ महाधिवेशनको तयारीको शिलशिलामा १७१ भन्दा बढी पार्टी प्रवेश गराएर मैरै हेटौँडा नगरपालिकाभित्र सक्रिय रहेको छ । सरकारले निषेधाज्ञामात्र गर्छ, स्वास्थ्यको राम्रो प्रबन्ध गर्न सक्दैन, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, पानी, शौचालय व्यवस्था गर्न सक्दैन भने सरकारको के काम रु जनजीवनलाई पनि चलायमान गरेर उद्योगधन्दा चलाउन पाईएको छैन । मजदुरले काम गर्न पाएका छैनन् । काम गर्न नपाए मजदुरले कहाँबाट खाने रु आज कमाए आजै खाने, भोली कमाए भोली खाने मान्छेले कसरी खाने रु मानवीय संवेदनशीलता खोइ राज्यको ?
त्यसोभए निषेधाज्ञा आवश्यक छैन भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो ?
निषेधाज्ञा आवश्यक छैन होइन, व्यवस्था भएन, राम्रोसँग गरिदैँन भने निषेधाज्ञा हामीले भन्नु पर्दैन, जनताले तोड्छन् । यो जरुरी छ कि छैन भनेर सबैलाई थाहा छ । राज्यले राम्रो व्यवस्था नगरेर खाली जर्बजस्ती निषेधाज्ञा गरेर मात्र हुन्छ रु अहिले घरघरमा गएर स्वास्थ्य व्यवस्था राम्रोसँग मिलाउन नसक्ने भए कहिलेसम्म मिलाउने, ५ महिना हुन लागिसक्यो रु यस्तो बेलामा भ्रष्ट्राचार गर्ने रु आइसोलेसनको नाममा सम्पूर्ण सामान खरीद गर्ने रु न्युनतम नेगोशियसन गरेर बन्द भएका सबै होटलहरूमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन सक्दैन राज्यले रु राज्यको एउटा सोच छैन रु अहिले जम्मै होटेल व्यवसायीहरू पीडित छन् । राज्यको काम तिनीहरूलाई पनि जोगाउने हो नि त । होटेलहरूको सबै जिम्मेवारी राज्यले लिएर त्यसैमा व्यवस्था गरेमा त्यहाँ ओड्ने ओछ्याउने छ, भाँडाकुँडाहरू छन्, त्यहाँ सबै कुरा छन्, त्यही गरे भईहाल्यो नि । राज्यको पैसा पनि बच्छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले काम गर्नुभएको छ, राम्रोसँग ?
अहिलेको विपद, महामारीको बेलामा सहकार्य, सहमति र एकताको सिद्धान्त हाम्रो स्वर्गीय शुशील कोइरालाले संविधान जारी गरेर गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेस जहिले पनि निकास दिन चाहन्छ । चाहे हिजोको विगतमा माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रियामा होस्, आजको संवाद गरेर प्रजातन्त्र ल्याउने विषयमा होस्, कांग्रेस पार्टी भनेकै जहिले पनि सहकार्य गरेर हामीले हिजोका नेताहरूको अनुशरण गर्दै त्यही सोचमा सहकार्य गर्नुपर्छ, अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्छ, मानवीय संवेदनशीलता छ, यो कोरोनाको बेलामा गर्नुपर्छ भनेर हामीले रोडमा जुलुस, नारा लिएर हिँड्ने अवस्था लिएर कांग्रेस गैर जिम्मेवारी पार्टी बन्न चाहँदैन । कांग्रेस एउटा इतिहास भएको जनताको बलमा उठेको पार्टी हो । नटेरेपछि अति नै भएपछि हामीले भनेको कुराको आधारमा हामी द्वन्द्व गर्न चाहदँैनौँ । अहिले यो सरकारलाई कांग्रेसले सल्लाह दिएको कुरालाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने काम गरेको छ । यसले मुलुकलाई भोली ठुलो असर पर्छ । आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न कति पैसा खर्च लाग्छ रु त्यही १० देखि २० अरब लाग्ला । अहिले अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा ७५ अरब उठ्यो । कहाँबाट उठ्छ पैसा रु यसरी कहाँबाट अर्थतन्त्र चल्छ रु यसमा व्यवस्थित गरेर आवश्यक परेको ठाउँमा सेना परिचालन गर्ने हो कि सशस्त्र परिचालन गर्नुपर्ने हो कि रु कुन कुन सुरक्षा निकायहरू परिचालन गर्नुपर्ने हो रु स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले करारमा लिनुपर्ने हो कि रु आवश्यकता अनुसार जनशक्ति लिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
आगामी सभापति कांग्रेसमा को, शेरबहादुर देउवा कि शशांक कोइराला कि शेखर कोइराला कि रामचन्द्र पौडेल, को रु तपाई कता हुनुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसभित्र कार्यकर्ताले अधिकतम मन पराएको मान्छे नेपाली कांग्रेसको सभापति हुन्छ ।
तपाई त शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापति बनाउनुपर्छ भनेर तपाई लागिरहनुभएको छ ?
पार्टी सभापति जति दिनसम्म शेरबहादुर देउवा हुने हो त्यति दिनसम्म पार्टीको नियम, अनुशासन, पद्धतिलाई मान्नुपर्छ । भोली शेरबहादुर देउवाले उठ्न चाहेको अवस्थामा मैले कसलाई मद्दत गर्ने भन्ने कुरा मेरो कुरा भयो । तर अहिले हामी यसलाई, उसलाई मद्दत गर्ने, कसलाई सभापति बनाउने भनेर हामी भन्न चाहदैनौँ । त्यसकारणले सबै जिल्लाबाट आएपछि छलफल गरेर नेपाली कांग्रेसको उत्तम सभापति सर्वसम्मत सभापतिको लागि नेपाली कांग्रेसमा अधिवेशन गराउने हो ।
अराजनीतिक आरोपपत्र निःशर्त फिर्ता भए विवाद सकिन्छः नेता रिमाल
गायनसङ्गीतमा उज्यालो भविष्य छ – सदस्य सचिव तमोट